भक्तपुरमा भाउजुले पटक पटक देवरलाई यस्तो गरेपछि ! यी छिमेकीले देखिन यस्तो घि*नलाग्दो काम (हेर्नुस् भिडियो) - Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/भक्तपुरमा भाउजुले पटक पटक देवरलाई यस्तो गरेपछि ! यी छिमेकीले देखिन यस्तो घि*नलाग्दो काम (हेर्नुस् भिडियो)
निकै लामो समयदेखि भक्तपुरमा एउटा निकै दर्दनाक घटना हुने गरेको खुल्न आएको छ । शारीरिक र मानसिक अवस्था दुवै गुमाएका देवरलाई भाउजुले हरेक दिन कु’ट्ने गरेको खुलासा भएको छ । अहिले २३ वर्ष पुगेका उनलाई उनि जन्मदा बाबाको मृ’त्यु भयो र आमाले पनि सानैमा छोडेर अर्कैसँग गएपछि दाई भाउजुसँगै बस्दै आएका छन् । तर आमा समान दर्जा दिईने भाउजुले पनि दानबिय व्यवहार गर्छिन् ।
भक्तपुरको एउटा इट्टा भट्टामा काम गर्ने उनीमाथि भाउजुले गर्ने अमानवीय व्यवहार देख्दा र सुन्दा कसको मन नदुख्ला र ? कसको आँखाबाट आँशु नझर्ला र ? भाउजुको उक्त निर्दयी व्यवहारका असहाय उनी दिन रात तड्पेर बस्न बाध्य छन् । हरेक दिन हुने उक्त अत्यन्त हृदय विदारक घटनाको बारेमा स्थानीयले खबर गरेपछि थाहा हुन आयो ।
प्रतक्षदर्शीका अनुसार हरेक दिन भाउजुले गरेको व्यवहारले मानवको नाताले मिडियालाई खबर गरेपश्चात अहिले उनको उद्दार भएको छ । अहिले उनलाई आश्रम लागिएको छ । उनको पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा र राम्रो भबिष्यको लागि उनलाई आश्रम लागिएको छ । अब उनले ति निर्दयी भाउजुले दिने यातना र पिडा सहन पर्नेछैन । पशुलाई त माया गरिन्छ भने उनि त मान्छे ! उनको सुनौलो भबिष्यको कामना गर्दछौं। बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला :